Hezekile 9 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
9 Yaye wamemeza ezindlebeni zam ngelizwi elikhulu, esithi: “Sondeza abo banikela ingqalelo yabo esixekweni, ngamnye enesixhobo sakhe esandleni sakhe ukuze bonakalise!” 2 Kwaye, khangela! kwakusiza amadoda amathandathu evela ngakwicala lesango eliphezulu+ elijonge ngasemntla, nganye inesixhobo sokukroboza esandleni sayo; yaye phakathi kwawo kwakukho enye indoda eyambethe ilinen,+ inophondo lweinki lukanobhala esinqeni sayo, angena ke aza ema ecaleni kwesibingelelo sobhedu.+ 3 Ke bona ubuqaqawuli bukaTHIXO kaSirayeli,+ benyuswa basuswa kwiikherubhi+ obebuphezu kwazo baza basiwa embundwini wendlu,+ yaye wamemeza kwindoda eyambethe ilinen,+ nekwakukho uphondo lweinki lukanobhala esinqeni sayo. 4 Waza uYehova wahlabela mgama wathi kuyo: “Dlula phakathi esixekweni, phakathi eYerusalem, uze ubeke uphawu emabunzini abantu abancwinayo nabagcumayo+ ngenxa yezinto ezicekisekayo ezenziwa phakathi kwaso.”+ 5 Wathi kwamanye lawo ezindlebeni zam: “Dlulani phakathi esixekweni emva kwayo nize nixabele. Malingabi nosizi iliso lenu, ningabi nayo nemfesane.+ 6 Indoda endala, umfana nentombi enyulu nomntwana omncinane nabafazi+ nize nibabulale—nibonakalise. Kodwa nawuphi na umntu onophawu ningasondeli kuye,+ yaye nize niqale engcweleni yam.”+ Ngoko aqala ngamadoda amakhulu awayephambi kwendlu.+ 7 Waza ngokubhekele phaya wathi kuwo: “Yenzeni inqambi indlu le nize nizalise iintendelezo ngababuleweyo.+ Phumani niye!” Aphuma ke aza axabela kuso isixeko. 8 Kwathi ke, ngoxa ayexabela yaye mna ndisele apho, ndawa ngobuso+ ndaza ndadanduluka ndathi: “Awu,+ Nkosi enguMongami Yehova! Ngaba ubonakalisa bonke na abaseleyo bakwaSirayeli ngoxa uphalaza umsindo wakho phezu kweYerusalem?”+ 9 Ngoko wathi kum: “Isiphoso sendlu kaSirayeli nekaYuda+ sikhulu kakhulu,+ yaye ilizwe lizaliswe luphalazo-gazi+ nesixeko sizaliswe bubugwenxa;+ kuba bathe, ‘UYehova ulishiyile ilizwe,+ uYehova akaboni.’+ 10 Nam ke, iliso lam aliyi kuba nosizi,+ ndingayi kubonisa nemfesane.+ Ngokuqinisekileyo ndiya kuzisa entlokweni yabo ngokwendlela yabo.”+ 11 Yaye, khangela! indoda eyayambethe ilinen, neyayinophondo lweinki esinqeni sayo, ibuya nelizwi elithi: “Ndenze kanye njengoko ubundiyalele.”+